Qodaalonline.blogspot.com: "Hordhac": Shirqoolkii Birmingham. Cali Cumar Xasan
Dareen aad u adag oo aan wanaagsanayn ayay gabadhaasi weedhaheedu igaga tageen, waana ta igu kaliftay in aan dadka u soo bandhigo, weerar fool-xun oo ay mudo 3sano ah-ba nagu hayeen dad abaabulan oo rag, dumar iyo dhalin-yarba leh oo reer Koonfur ah oo u badan Hawiye! Dhibaatooyinka ay ilaa iyo haatan qoyskayga (reer Cali Cumar Xasan) soo gaadhsiiyeen qolyahan is-urursaday oo tabo iyo xeelado badan adeegsanaya waxa ka mid ah;
1; Laba jeer oo wiil aan dhalay ay ka dhaceen lacagta ardayda Jaamacada la siiyo (student finance) oo cadadkeedu dhan yahay isku gayn £3300. Intaas uun ma ahee, isla wiilkan waxay ka qaateen 3-iPhone oo ay ka xoogeen. "Faahfaahinta arinta iyo sida ay u dhacday ka akhriso qoraalo aan soo bandhigi doono.
2. Wiil kale oo aan dhalay oo ay madaxa bir kaga dhufteen oo ay qarxiyeen.
3. Telefoonadayada (qoyska oo dhan) oo ay u suurta-gashay inay dhagaystaan , dabadeedna, xogaha qoyskayga ee ay helaan Social-media-ha iyo dadkooda ku dhex-baahiyaan. Ka dibna xogahaas ay dib anaga noogu isticmaalaan oo ay noogu dhibaateeyaan.
4. Police-ka oo ay telefoon u diraan oo ay nagu soo hogaamiyaan, iyaga oo u sheegaya in gurigayaga dagaal, rabshado, qaylo iwm-ahi ka jiraan.
5. Magaca wiil aan dhalay oo ay si joogto ah cunto (take away) ugu dalbaan (order online) oo ay adarayskaya siiyaan, taas oo dabadeed gurigayaga la keeno, lacagna lana waydiiyo.
6. Aniga (Cali Cumar Xasan) oo ay sawiradayda ku baahiyeen Social media-ha iyaga oo raaciyay codad iyo xoggo ii gaar ah, dabadeed, igu timaamay in aan ahay Paedophile (ragga caruurta yaryar faro-xumeeya). Arintan ma aha mid cusub ee waxa la hal-abuuray 10sano ka hor ee kolba kooxda aan is-hayno ayaa soo cosboonaysata oo hub ay igula dagaalamaan ka dhigata.
7. Iyo in kale oo badan oo qarsoon!
Hadaba, Sahra (gabadhii ii digtay) maxaan u-balan qaaday? arintani goorma ayay bilaabantay, yaase bilaabay? dadkan na hagardaamaynayaa maxay naga rabaan ee ay qoyskayga u bartilmaansanayaan? maxaanu ilaa haatan ka soo samaynay arintan, maxaa-se nala gudboon? mustaqbalka xaaladan qalafsan halkuu ku dambayn doonaa? kuwaas iyo su'aalo kale oo badan-ba waxad jawaabahooda kaga bogan doontaa qoraalo dhawr ah oo aan Insha -Allah dhawaan idin la wadaagi doono. Hadaba, akhristayaasha sharafta leh-oow, waaba intaas oo ay arintani saamayn idinku yeelataaye, idinkuna bal dhaayahiina i yara amaanaysiiya oo la-socda sheekadan kakan ee dusha oo uu magacoodu noqon doono, magaca ay Sahra X. bixisay ee ah "Shirqoolkii Birmingham".
F.G: Hoosta guji oo ka akhri qaybta 1aad ee Shirqoolkii Birmingham.
"Ha jirto Somaliland Oo Ha Joogto Weligeed"
Posted by WYL-News at 1:57 PM